Astragalus - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Astragalus
Astragalus ကို ခေတ်ပြိုင်တရုတ် ဆေးပညာမှာ ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး အခြား model တွေမှာလည်း ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Astragalus ဟာ ကာမ အားတိုးစေပြီး သုက်ပိုးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
Astragalus ကို အအေးမိခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ fibromyalgia၊ သွေးအားနည်းခြင်းနဲ့ HIV/ AIDS လူနာတွေမှာ ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ သူ့ကို CFS၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ သွေးပေါင်တက်ခြင်းတွေမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Astragalus ဟာ ကိုယ်ခန္ဓါကို ကင်ဆာနဲ့ ဆီးချိုကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သူ့မှာ antioxidants တွေပါဝင်ပြီးတော့ ဆဲလ်ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Astragalus ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချို့လေ့လာမှုတွေက Astragalus ကို တစ်ခုတည်း (သို့) အခြားအပင်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ် အသုံးပြုခြင်းဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်၊ နှလုံးနဲ့ အသည်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ သူ့ကို ကင်ဆာခွဲစိတ်ကုသအပြီးမှာ ကုသနည်းအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေက Astragalus ဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ရဲ့ အချက်အလက် အများအပြားကို လှုံ့ဆော်ပေးတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဓါတ်ခွဲ စစ်ဆေးမှုတွေမှာ Astragalus ဟာ monocytes, natural killer cells နဲ့ lymphocytes တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ကို steroid အစရှိတဲ့ ဆေးတွေသောက်နေရင်တောင်မှ မြှင့်တင်ပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ Astragalus ကို ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေမှာ မသုံးသင့်ပါဘူး။
Astragalus ကို တင်ချာရည်၊ အရည်၊ ဆေးတောင့်ပုံစံနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နှလုံးရောင်ခြင်းကိုကုသဖို့ Astragalus ကို ထိုးဆေးအနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Astragalus ကို နို့တိုက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေမရှိပါဘူး။ ဆေးတွေ၊ အပင်တွေ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
Astragalus ကို ရောဂါပိုးရုတ်တရက်ဝင်ခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်းနဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းတွေ ရှိရင် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Astragalus ကို ကလေးတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Astragalusကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Astragalus ကနေ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ရနိုင်ပါသလဲ။
Astragalus ဟာ လူကြီးတွေအတွက် စိတ်ချရတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ Astragalus ကို အခြားအပင်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုတော့ သေချာ သိရှိခြင်း မရှိပါဘူး။
Astragalus ဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ပိုမိုအားကောင်းစေတာကြောင့် auto-immune disease တွေဖြစ်တဲ့ multiple sclerosis (MS), lupus (systemic lupus erythematosus, SLE), rheumatoid arthritis (RA) တွေကို ပိုမို ဆိုးရွားစေပါတယ်။
လူတွေအသုံးပြုတဲ့ စားသောက်တဲ့ အထဲမှာ ပါဝင်လေ့မရှိတဲ့ Astragalus အချို့မျိုးတွေကတော့ အဆိပ်သင့်နိုင်ပါတယ်။
Astragalus ဟာ ကိုယ်ခံအားကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းစေတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ cyclosporine နဲ့ cortisone ဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ကို နှောင့်ယှက်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေနဲ့ အတူ Astragalus ကို သောက်သုံးခြင်း မပြုသင့်ပါဘူး။ အခြား ကိုယ်ခံအားအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိတဲ့ ဆေးတွေနဲ့လည်း အတူ မသောက်သင့်ပါဘူး။
Lithium – Astragalus ဟာ ကိုယ်ခန္ဓါက lithum ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ခက်ခဲစေတာမို့ ဒီဆေးတွေ ကိုယ်ခန္ဓါအတွင်း များပြားစေပါတယ်။
ဒီ herbal supplement ဟာသင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Astragalusအတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Astragalus ထုတ်ကုန်တွေကို အသုံးပြုရမယ့် ပမာဏကို သေချာစွာ သိရှိခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှုန့်ကြိတ်ထားတဲ့ အမြစ်ကို 2-6g ကို သောက်သုံးဖို့ ညွှန်းလေ့ရှိပါတယ်။
Astragalus ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Astragalus ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Astragalus ပင်ရဲ့ အမြစ်ကို စွပ်ပြုတ်၊ လက်ဖက်ရည်၊ extracts၊ သောက်ဆေးတောင့် အနေနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Astragalus ကို ပုံမှန်အားဖြင့် အခြား အပင်တွေဖြစ်တဲ့ ginseng, angelica နဲ့ licorice တို့နဲ့ အတူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001 Print version. Page 40.
Astragalus. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 963-astragalus.aspx?activeingredientid=963&activeingredientname=astragalus. Assessed August 3, 2016.
Astragalus. https://umm.edu/health/medical/altmed/herb/astragalus. Assessed August 3, 2016.
Astragalus. https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative- medicine/herbs/astragalus. Assessed August 3, 2016.
Astragalus. http://www.drugs.com/npc/astragalus.html. Assessed August 3, 2016.
Astragalus. https://nccih.nih.gov/health/astragalus. Assessed August 3, 2016.Skidmore-Roth, Linda.Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001 Print
version. Page 40.
Astragalus. https://nccih.nih.gov/health/astragalus. Assessed August 3, 2016.